Budata magazin n'efu: weebụsaịtị kacha mma 3 na Spanish | Akụkọ akụrụngwa
Budata magazin n'efu: weebụsaịtị kacha mma 3 na Spanish
Paco L Gutierrez | | ndị na-agụ akwụkwọ, General
Oge dijitalụ bụ eziokwu, maka ihe ọma na ihe ọjọọ. Ọ bụ eziokwu a gosipụtara na obere na obere nta akụkọ na-eri na usoro anụ ahụ, ebe ọ bụ na ịntanetị bụ nnukwu isi iyi nke ozi maka otu pịa ma ọ bụ ọchụchọ. Ka odi ọ pleasureụ nke ịgụ akwụkwọ akụkọ nwayọ na tebụl cafeteria mgbe anyị na-anụ ụtọ kọfị ma ọ bụ nri ụtụtụ. Ma ọ na-esiwanyewanye ike inwe otu ihe nkiri a na ama na otu aka na kọfị na nke ọzọ.
Ana m echeta nke ọma mgbe m ji ịnụ ọkụ n'obi na-aga kiosk m tụkwasịrị obi maka akwụkwọ akụkọ egwuregwu vidiyo kachasị amasị m n'ihi na mgbakwunye na ịbụ naanị isi iyi nke ozi, ha nyere ndị ngosi ma ọ bụ akwụkwọ mmado nke anyị ga-emechi na ime ụlọ anyị. Ma ugbu a, a na-ekesa demos dijitalụ na-akwụghị ụgwọ, yana nnukwu uru nke emelitere kwa nkeji. Otú ọ dị, akwụkwọ akụkọ ahụ, ọ bụrụ na ọ nwere ozi ọjọọ ọ bụla, anyị ga-edebe ya ruo mgbe ọzọ. N'isiokwu a, anyị ga-ahụ saịtị kachasị mma iji budata akwụkwọ akụkọ n'efu.
1 Uru nke ọgụgụ dijitalụ
2 Etu esi ebudata magazin n'efu
6 Ebe kachasị mma iji budata akwụkwọ akụkọ egwuregwu
7 Ebe kachasị mma iji budata magazin site n'obi
Uru nke ọgụgụ dijitalụ
Isi uru nke usoro a bụ mma nke na ọ dabere na kiosk, yana oghere anyị na-echekwa na nchekwa. Anyị enweghị ike ichefu ma mmetụta gburugburu ebe obibi nke mbenata ojiji nke akwụkwọ maka ụdị nhazi a, ihe dị ka ọ dịghị mkpa, mana ọ nwere nnukwu ihe n'ihi na akwụkwọ bụ ihe dị mkpa dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchekwa ntakịrị, anyị na-eme ụwa nke ọma.
Anyị enweghị ike ichefu nkasi obi dị na ịnwe magazin anyị na ngwaọrụ anyị niile, n'agbanyeghị ebe anyị nọ, site na ama anyị, na iPad anyị. Jiri katalọgụ kasịnụ nke anyị nwere ike ịhụ magazin ọ bụla masịrị anyị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla nwere onye na-agụ PDF, nke bụ usoro kachasị eji maka ụdị ọdịnaya a. Ọ na-ewe obere obere ka anyị wee ghara ichegbu onwe anyị banyere nchekwa anyị nwere na ngwaọrụ anyị. Anyị nwedịrị ike bulite ya n'igwe ojii iji nweta akwụkwọ akụkọ na-enweghị ibudata ya.
Etu esi ebudata magazin n'efu
Nnyocha Google dị mfe na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ puku isi mmalite iji budata faịlụ PDF site na magazin. Mana anyị na-enwe obi abụọ ma ọ bụ ụjọ mgbe niile n’amaghị kpọmkwem ihe anyị na-ebudata, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị nwere ezigbo antivirus, ọ ga-adọ anyị aka ntị ma ọ bụrụ na anyị anaghị ebudata ihe anyị chọrọ ibudata. Offọdụ n'ime Portals ndị a na-eji ohere zoro ezo ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ndọtị maka ihe nchọgharị ahụ, yabụ anyị ga-akpachara anya ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka arụmọrụ nke ihe nchọgharị anyị metụta site na ịwụnye ihe anyị ekwesịghị.
Maka nke a, anyị ga - ahọrọ weebụsaịtị nke ị nwere ike ibudata magazin anyị n’enweghị nsogbu. Ha niile nwere nnukwu katalọgụ iji budata magazin ma ọ bụ akwụkwọ. Iji budata ha naanị anyị ga-abanye na webụ wee họrọ faịlụ ahụ, site na nbudata ozugbo ma ọ bụ site na mmemme Torrent nke web n'onwe ya na-atụ aro.
Ebe nrụọrụ weebụ mbụ anyị ga-ekwu maka ya, Kiosko.net bụ ọrụ izizi dị mfe ma dịkwa mfe. Ọ bụ ọrụ mgbochi mmiri nke enwere ike ile isi mkpuchi nke akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ kachasị mkpa n'ụwa. Imewe bụ echiche mbụ nke onye nrụpụta Hector Marcos na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Na ibe mbu anyị na-ahụ akwụkwọ akụkọ 5 site na kọntinenti ọ bụla, ha niile na nsụgharị Bekee ha na Spanish. Enwere ike ime ka ihe mkpuchi ahụ gbasaa site na ịmegharị cursor òké nso ya. Tụkwasị na nke a, enwere ike ịgbasawanye otu ma ọ bụrụ na anyị pịa mkpuchi na isi pịa. Ọ bụrụ na anyị pịa ọzọ, ọ ga-akpọrọ anyị njikọ nke akwụkwọ akụkọ na ajụjụ.
Anyị nwere nnukwu nhọrọ ederede edere na Spain, n'etiti nke anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị ịhọrọ site na. N'etiti ha "Akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị", "Magazin", "Magazin Kọmputa", "Magazin Ọha" na ọtụtụ ndị ọzọ. N'etiti ngalaba ndị ama ama, anyị na-ahụkwa akwụkwọ akụkọ egwuregwu na asịrị asịrị nke doro anya na ọhaneze na-achọkarị.
Ekwesịrị m ịsị na ibe a yiri m ka ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na ịntanetị, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere ịtụle akụkọ niile na-asụ Spanish, kamakwa na-enye anyị ohere ịbanye na ndị mgbasa ozi mba ọzọ. ọ bụrụ na anyị ma asụsụ, anyị ga-ama ihe niile na-eme n’ụwa.
O doro anya na nke a bụ onye ọzọ nke ukwuu na ngalaba ahụ n'ihe gbasara ịgụ akwụkwọ akụkọ, mana na nke a, ihe ka ọtụtụ ọdịnaya bụ kpamkpam n'asụsụ Bekee. O nwere katalọgụ sara mbara nke anyị nwere ike ịchọta pịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla. Ekele maka njin ọchụchọ ya dị ike anyị ga-ahụ ihe ọ bụla anyị na-achọ, n'agbanyeghị na dịka m na-ekwu, ọtụtụ nsonaazụ ya nwere ike ịbụ na Bekee.
N'ezie, anyị nwere ike itinye ihe nzacha na nchọta a kwuru, n'ime ha bụ nzacha asụsụ, yabụ ọ bụrụ na anyị na-achọ naanị asụsụ a kapịrị ọnụ, anyị ga-achọta ya. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime weebụsaịtị PDF pịa zuru oke na ịntanetị. Ma enweghị obi abụọ ọ bụla O nwere ike ịdaba ma ọ bụrụ na anyị na-achọ magazin n'asụsụ Spanish.
Anyị nwere ọtụtụ ọdịnaya sitere na magazin egwuregwu ma ọ bụ akwụkwọ asịrị, ọ bụ ezie na ha nwere ike ọ gaghị adị ruo oge niile, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwe ọhụụ na Spanish, Kiosko.net doro anya bụ nhọrọ ka mma karịa nke a.
Anyị bịarutere na ebe nrụọrụ weebụ kachasị dị m mkpa, ozugbo anyị banyere, anyị na-ahụ akwụkwọ kachasị ọhụrụ, nke dị na ya anyị na-achọta akwụkwọ akụkọ egwuregwu, obi, moto, na ndị ọzọ. Aha aha weebụsaịtị ahụ na-egosi na na nke a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịnaya niile dị na Spanish, mana nsogbu dị na weebụsaịtị a bụ na ọtụtụ ọdịnaya ya agafewo. Chọta magazin 2016 n'etiti ndị a ma ama na mkpuchi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ ihe n’enweghị oge, n’enweghị mgbagha ọ bụla ịnwere ike ịkwakọba ọtụtụ akwụkwọ akụkọ moto, nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ na enweghị ịkpa oke nke anụ ahụ. N'etiti taabụ anyị ga-ahọrọ ọdịnaya, anyị na-ahụ ngalaba nke ndị edemede, ụdị na usoro. Anyị na-achọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ magazin ọ bụla anyị nwere ike iche maka, gụnyere ndị na-atọ ọchị ma ọ bụ akwụkwọ nri.
Ebe kachasị mma iji budata akwụkwọ akụkọ egwuregwu
Obi abụọ adịghị ya na nkwanye anyị bụ Kiosko.net, n'ihi na ọ bụ ahịa ọtụtụ nde dollar, emechiela ọtụtụ ọnụ ụzọ, yabụ onyinye ahụ pere mpe. Agbanyeghị na Kiosko.net anyị na - ahụ ihe niile anyị nwere ike iche n’echiche maka egwuregwu. Nke kachasị mma, peeji a bụ iwu zuru oke, yabụ na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị.
Ọ na-enye anyị ohere ibudata ọtụtụ aha, n'etiti nke anyị nwere ike ịchọta bọl, moto, tenis, basketball ma ọ bụ egwuregwu. Ihe ederede a nwere ike idi ntakịrị site na otu ihe ahụ anyị kwuburu na mbụ, mana na-eche na ọ bụ n'efu, anyị enweghị ike itinye ọtụtụ ndọghachi azụ na ya.
Ebe kachasị mma iji budata magazin site n'obi
N'ikpeazụ, anyị ga-enye nkọwa banyere nbudata nke PDF nke isiokwu nke obi, isiokwu nke na-arị elu mgbe niile na mba anyị. Obi abụọ adịghị ya na magazin nke obi na-aza ebe a na-ere akwụkwọ akụkọ, ebe ọ bụ otu n'ime mmadụ ole na ole na-eme ka ha dịrị ndụ. Magazin dịka Hola, Cosmopolitan, interviú ma ọ bụ Clara so n’ime ndị a kacha mara amara.
Anyị na-akwado gị PDF-Giant, otu ọnụ ụzọ nwere ọtụtụ katalọgụ nke isiokwu a, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime peeji ndị kachasị atụ aro. Ọ bụ ezie na mụ onwe m aghaghị ikwu nke ahụ M ka na-ahọrọ Kiosko.net. Ọ bụ ezie na nhọrọ ndị ọzọ anyị nwere ka mma, ebe enwere ike ịchọta nke a ka ọ daa n'oge ụfọdụ, yabụ na ọ dị mma mgbe niile ịnwe ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Budata magazin n'efu: weebụsaịtị kacha mma 3 na Spanish
Amazon Fire TV Cube, ike niile na telivishọn gị [Nyocha]